“Waxaa muhiim ah inaan u ciyaarno sida ugu wanaagsan kulanka Manchester derby” – Guardiola – Gool FM
“Waxaa muhiim ah inaan u ciyaarno sida ugu wanaagsan kulanka Manchester derby” – Guardiola
(Manchester) 10 Nof 2018. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa aaminsan in kulanka Manchester derby ay Axada kula ciyaari doonaan dariskooda United-ka aanaan lagu go’aamin karin sida uu ku dhamaan doono xili ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Manchester City ayaa ku guuleesatay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay kulankii ka dhacay Etihad Stadium inay ku hor marto 2 gool, balse Red Devils ayaa natiijada ciyaarta u badashay 2-3, isla markaana guul muhiim ah lasoo laabatay.
Pep Guardiola ayaa kahor kulankan kasoo muuqday shir jaraa’id maanta oo jimco ah wxuuna ka hadlay dhowr arimood:
“Waxaa muhiim ah inaan u ciyaarno sida ugu wanaagsan, hadii ay sidaas dhacdo waxaan heli doonaa fursad aan ku guuleysan karno, uma maleenayo inaan ciyaari karno 90 daqiiqo ee cajiib ah, maadaama aan wajaheyno koox weyn”.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u ciyaarno sida xilli ciyaareedkii hore ee aan ku hormarnay 2-0, laakiin United ayaa na tusisay inay 10 ama 15 daqiiqo ku qaadatay si ay u sameyso fursad ay gool ku dhalin karto”.
“Marka ay kubada heystaan waxay sameyn karaan waxa ay doonayaan, sababtoo ah waxay leeyihiin xirfado heer sare ah”.
“Waxaan ku jirnaa bisha November, sidaasi darteed waxaa dhici karta in kulanka Old Trafford la ciyaaro bisha March, haatan waxaan ku jirnaa xilli fiican, wuxuu noqon doonaa kulan muhiim u ah labada kooxood xiligaas ee xaalada lagu go’aamin karo”.
“Manchester United wali kama aysan bixin loolanka horyaalka Premier League, xitaa hadii ay guuldareystaan kulanka soo aadan, kooxda waxay si weyn kaga soo kabatay, waqtigii adkaa ay soo martay”.
“Manchester United waxay ahayd koox weyn tan iyo markii aan qabtay shaqadan, waxaan isku dayayaa inaan ka dhaadhiciyo ciyaartoyda in kooxda naga soo hor jeeda inaysan marna is dhiibi doonin”.
Pogba oo SHAKI Wayn laga muujinayo kulanka berito ee Manchester Derby...(Maxaa helay??)